कत्तिको मसलेदार खाना खानुहुन्छ, अबदेखि थोरै मसला बढाउनुस् !
एजेन्सी । कत्तिको मसलेदार खाना खानुहुन्छ ? खानामा खासै मसला राख्नुहुन्न भने अब अलि बढाउनुस् । मसलेदार खानाले क्यान्सरजस्ता कैयन रोगबाट हुने मृत्युको सम्भावना कम गर्ने गरेको निष्कर्ष एक अध्ययनले निकालेको छ ।
ब्रिटीस मेडिकल जरनलमा प्रकाशित रिपोर्टमा अनुसन्धानकर्ताहरुले उल्लेख गरेका छन्, ‘मसलेदार भोजनले क्यान्सर, मुटु तथा स्वासप्रस्वास सम्बन्धी बिमारीबाट हुने मृत्युबाट जोगिन सघाउँछ । यो कुरा पुरुष भन्दा महिलामा बढि लागु हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
अनुसन्धानमा हिंस्सा लिने मानिसहरु मध्ये मसलेदार खाना खानेहरुको मृत्युको सम्भावना कम मसलेदार खाना खानेहरुभन्दा १४ प्रतिशत कम पाइयो । यद्यपी रक्सी नपिउनेहरुको हकमामात्रै यो कुरा लागु हुने रिपोर्टमा जनाइएकोछ ।
मसलामा यस्ता तत्व हुन्छन्, जुन स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक रहने अध्ययनको निष्कर्ष छ । यस विषयमा थप अनुसन्धान हुन भने बाँकी नै छ ।
तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ शंख बजाउनुको यी चमत्कारिक फाइदा
के तपाईंलाई थाहा छ, काँचो दूधको यो फाइदा ?